Uvavanyo olubonisa ukuba i-AirTag ingaphezulu kweTile | Ndisuka mac
Ii-AirTag azize ziyeke ukusothusa. Ngamanye amaxesha kungcono kwaye ngamanye amaxesha akuninzi. Ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kuvavanyo lomhlalutyi weApple kwi Washington Post kwaye ayizishiyanga izixhobo zenkampani kakuhle, ngoku sinolunye ulwazi olutsha olusekwe kumava okwenyani. Bazimisele ukuthelekisa i-AirTag kunye neTile ngokubenza bobabini baphume kwifowuni. Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana enye kunye nenye?
Ukusuka I-Techradar, imagazini egxile kuApple kunye netekhnoloji, igqibe kwelokuba ifumanise ukuba ngaba i-AirTag okanye iTile ingafunyanwa kuqala, ishiye ngabom enye nenye ngaphandle kwe-smartphone. Ibilixesha kuthathe ixesha elingakanani nganye ukufunyanwa ngabanye abasebenzisi. Uvavanyo uninzi lwethu ebenalo engqondweni kodwa khange sibe nabuganga bokuvavanya okanye ukwenza ngenxa yomngcipheko obandakanya oko (ngokusisiseko ukuphuma kwi-AirTag).
1 Imizuzu engama-30 ye-AirTag. Iiyure ezili-12 ukuya kwiTayile.
2 Sisiphi isigqibo ekufikelelwe kuso emva kovavanyo?
Imizuzu engama-30 ye-AirTag. Iiyure ezili-12 ukuya kwiTayile.
Sicinga ukuba zombini ezi zixhobo, nangona zinemishini efanayo, zisebenza ngokwahlukileyo. I-AirTag inesiseko somsebenzisi enkosi yokufumana kwam kwaye intsha kakhulu kwintengiso. Nangona kunjalo, iTile sele ikwimakethi kangangeminyaka embalwa. Zombini zinezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga. Nguwuphi oya kuqala?
I-TechRadar ithumele zombini "ngasemva komqondiso kwisitrato esixakekileyo, imayile ukusuka endlwini yakhe" ngentsimbi ye-9 kusasa ngoMvulo Ukubuyela ekhaya, bobabini baphawule ukuba balahlekile, balinda ke. Ukuthathela ingqalelo ukuba bebengaphandle kuluhlu.
Kwimizuzu nje engama-30, kwavela isaziso kunye nendawo ye-AirTag elahlekileyo, njengoko ichongiwe yi-iPhone edlulayo, nangona indawo enikiweyo yayiyindlela ehambelana naleyo sasiyibeke kuyo ekuqaleni, nangona yayisesendaweni yokuqala.
Ingxelo ithi ngokufanayo aI-lerta yafunyanwa amaxesha ali-13 ewonke kwii-iPhones ezininzi ezidlulileyo. Abasebenzisi bayo bachonge i-tracker elahlekileyo. Ngokubalulekileyo, indawo enikiweyo yahlengahlengiswa ixesha ngalinye. Indlela ekufutshane efanayo yaphawulwa endaweni apho i-AirTag ishiye khona. Umsebenzi ochanekileyo wokufumana izinto eziphuhliswe yiApple kwaye zixhotyiswe ngetekhnoloji yeWideband, inokulungisa oku kungabikho kokuchaneka kwendawo ukuba sizama ukufumana izinto ezilahlekileyo.
Nangona kunjalo kwaye apha kuza ezothusayo, kukuba zenzekile "Phantse iiyure ezili-12" ngaphambi kokuba umntu waseTile ayibone. Ngoku nangona kunjalo, ngokungafaniyo ne-AirTag, indawo enikiweyo ibichaneke ngakumbi kunakuqala kwi-AirTags.
Sisiphi isigqibo ekufikelelwe kuso emva kovavanyo?
Amalungu eTechradar afikelela kwisigqibo sokuba, ukuba awukho kuluhlu lwesixhobo sakho sokulandela umkhondo, kunokwenzeka ukuba ufumane i-AirTag ngokukhawuleza kuneThayile. Oku kubangelwe bubungakanani boluntu olunayo i-iPhone. Yintoni eqinisekileyo kukuba ukufumana i-AirTag, i-iPhone okanye i-iPad, kuya kufuneka usebenzise i-iOS 14.5, eyona nguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza, kwaye ufumane ukuba umsebenzi wam we-iPhone usebenze.
Njengoko ingxelo isitsho, ukwanda kwe-iOS, ngakumbi i-iOS 14, kunjalo I-AirTag sele iyitracker enamandla kakhulu ngaphandle nje kweeveki ezimbalwa ubudala, enkosi Itekhnoloji ye-FindMy ye-Apple kunye ne-ecosystem yayo.
Kodwa kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ubuchwephesha bokuba nakho ukufumana i-AirTag elahlekileyo kamva ishiya okunqwenelekayo. Kunokuba lula kwigumbi lokuhlala lendlu yethu kwaye akunamsebenzi ukuba kukho ukushiyeka kweemitha ezimbalwa. Kodwa esitratweni, elo nani lingalonakalisa usuku lwakho. Kukho izinto ezingaphezulu ezichaphazela ukuchaneka. Oh Kulungile. bhetele kwimizuzu engama-30 kunokuba kungabi kwiiyure ezili-12, kunjalo. Kungcono undazise kwangaphambili kwaye uchithe ixesha elifunekayo lokufumana into kunokuba ungalindi isiqingatha sosuku ukufumana izitshixo, umzekelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Uvavanyo olubonisa ukuba i-AirTag ingaphezulu kweeTayile